5 farsamo oo aad ku maareyn karto biyo-baxa deg dega ah | Raganimo University
5 farsamo oo aad ku maareyn karto biyo-baxa deg dega ah
Rag badan ayaa ka walwalsan in ay degdeg ku biyo baxaan marka ay galmada sameynayaan. Biyo-baxa deg dega ayaa ah mid saameyn ku yeesha kalsoonida raga iyagoo aaminsan in aysan gabadha sariirta ku qancin karin. Inkastoo caafimaad ahaan ay jiraan rag ay si weyn u saameyso (premature ejaculation) hadana raga badan kooda biyo-baxa deg dega ah uma baahna in ay daawo u isticmaalaan. Raac taalooyinkaan si aad u maareyso biyo-baxa deg deg ah.
Baashaalka ku naso
Haddii aad dareemayso xasaasiyad in aad biyo-bax ku dhowdahay waxaad sameyn kartaa in aad guska kala baxdo gabadha oo aad ku nasato in aad si kale u baashaaliso. Sida in aad u leefto ama faraha isticmaasho. Waxaad u baahantahay waa daqiiqado keliya si dareenka uu kaaga yaraato ka dibna aad dib ugu noqoto. Xitaa adiga oo aan guska la bixin ayaad nasiino qaadan kartaa adiga oo joojinaya dhaqdhaaqa isla markaana gabadha u sheegaya in aysan dhaqaaqin. .
Dhinaca galmada ayaa saameyn weyn ku leh in aad deg deg u biyo baxdo iyo in kale. Raga qaar ayaa dareemaya kacsi saa'id ah iyo xasaasiyad badan marka ay gabadha gadaal uga galmoonayaan ama marka ay gabadhu ka sareyso. Isku day in aad barato dhinaca (positionka) ugu xasaasiyada yar ee adiga ku anfacaya. Dhinaca ninku uu ka sareeyo gabadha ayaa la sheegaa in uu yahay midka ninku ugu kontoroolka badanyahay taasoo kaa caawin karta in aad xakameyso dhaqdhaqaaqaaga iyo kan gabadha.
Kondomka ayaa la ogyahay in uu yareeyo dareenka guska, iyadoo qaasatan uu u fiicanyahay ninka ka cabsanaya in uu deg deg u biyo baxo. Sidoo kale kondomku waxa uu u fiicanyahay kontoroolka uurka iyo amaanka cudurada galmada ku faafa
Markale ku noqo
Horta in aad biyo baxdo maxaa ka fiican? waa dareen macaan, ka waran haddii aad markale ku noqoto? waxaad sameyn kartaa in aad badasho fikirkaaga ku aadan biyo baxa. U sheeg niyadaada iyo gabadha in aad dhowr jeer biyo bixi karto. Haddaa doonto ku biyo bax 5 daqiiqo. U naso 10 daqiiqo ka dibna ku laabo raaxada. Marka labaad waxaa hubaal ah in dareenka uu ka yartahay intii hore oo aad gaari karto 30 daqiiqo ama 1 saac ama ka badan. Ama xitaa aad mar sadexaad ku noqon karto.
Wax kale ka fikir
Biyo baxa waxa keena ma ahan jirka iyo dhaqdhaqaaqa ee xitaa waxaa saameyn ku leh waxaad niyada ku hayso iyo sida aad ugu xiiso qabto gabadha. Isku day in aad ka fikirto waxyaabo kale inta aad galmada sameynayso. Taasi waxay yareynaysaa kacsiga iyo xasaasiyada.
Haddii aad aaminsantahay in xaaladaada ay tahay mid adag oo daawo u baahan. Waxaad u tagi kartaa dhaqtar si aad ula tashato. Waxaan filayaa in aad ka faa'ideysateen mowduucaan.